မြဝတီ ပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်း ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် နေရပ်ပြန် အလုပ်သမား ၃ဝဝဝ ခန့် သောင်ရင်းမြ?? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသည့် တရားမဝင်အလုပ်သမားများ ကြိုဆိုလက်ခံသည့် မြန်မာ- ထိုင်းနယ် စပ်ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ကျောက်လုံးကြီးလမ်းရှိ မြဝတီပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်း ပိတ်သိမ်းပြီးနောက် သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းရှိ ၉၉၉ ဂိတ်မှ ပြန်လည်ဝင် ရောက်လာသူ ၃ဝဝဝ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်းကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းအနီး မြဝတီမြို့ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်ရှိ ၉၉၉ ဂိတ်မှ တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမားများ ပြန်လည်ဝင် ရောက်လျက်ရှိရာ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် မှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် အထိ ရက်ပေါင်း ၅ဝ အတွင်း ထိုင်း နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ၃ဝဝဝ ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့က ပြန်လာတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို သူတို့ နေရပ်ဒေသကို ချောမောစွာပြန် ရောက်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးနေတယ်။ ကျောက်လုံးကြီးကြိုဆိုရေးစခန်း ပိတ်ထားတဲ့အတွက် ဒီ ၉၉၉ ဂိတ်ကပဲ ဝင်လာကြတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့် သူ တို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို တစ်ဖက် တစ်လမ်းကကူညီပေးနေတာ။ ကျန်းမာရေး၊ နေထိုင်ရေးကအစကူညီ ပေးတယ်”ဟု ၉၉၉ ဂိတ်မှ တာဝန်ခံ ကိုထွေးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာ- ထိုင်းနယ်စပ် သောင်ရင်းမြစ်ဘေး မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် တရားမဝင်ဂိတ်ပေါင်း ၂ဝ ခန့်ရှိပြီး အဆိုပါဂိတ်များမှ လူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ နှစ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ထွက်နေပြီး ၉၉၉ ဂိတ်ကို နယ်ခြားစောင့်တပ် တပ် နယ် (၃) မှ ကြီးကြပ်နေကာ ထိုင်း နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာ သော မြန်မာအလုပ်သမားများ နေ ရပ်ပြန်နိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေးနှင့် အထွေထွေကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ၉၉၉ ဂိတ်မှ တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမား ၅၈ ဦး ပြန်လည် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက တွေ့ရှိခဲ့သော ဘားအံမြို့နယ်ရှိ 'ဣစ္ဆာသယ လိုဏ်ဂူ' သို့ လာရောက် လည်?
အသင်းအပေါ် လျှော့တွက်မှုများအား အက်ရ်ှလေယန်း ဂရုမစိုက်၊ တိုက်စစ်မှူးဆန်းချက်ဇ် ခြောက်ပတ်မှ